श्रीमतिको उपचारमा सहयोग गर्न श्रीमानको हारगुहार – Rara Khabar
श्रीमतिको उपचारमा सहयोग गर्न श्रीमानको हारगुहार
सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिका –३ मटेलाका झुपलाल शर्माले श्रीमति रामसराको उपचारको लागि सहयोगको याचना गर्नु भएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा श्रीमतिको उपचारमा समस्या भएको भन्दै उहाँँले सहयोगको याचना गर्नु भएको हो ।
एक्कासी बिरामी भएपछि यही भदौ १ गतेदेखि रामसरालाई आइसीयूमा राखेर मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भैइरहेको छ । पहिले दम औषधी नियमित खाइरहेको थियो झुपलालले भन्नुभयो, अहिले एकैपटक धेरै समस्या देखियो । उपचार गर्दा अहिलेसम्म ४० हजार रुपैया सकियो अव डाक्टर सापले थप उपचारको लागि काठमाडौ लिने भन्नु भएको छ अझै कति खर्च हुन्छ थाहाँ छैन उहाँले भन्नुभयो ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालले रामसरालाई मेनेनजाइटिस भएर त्यसको संक्रमण शरीर भरी फैलिएको बताएको छ । अस्पतालका डा. केएन पौडेलले मेनेनजाइटिसको संक्रमण कलेजो र मृगौलामा फैलिएको आइसीयूमा राखेर उपचार थालिएको बताउँनु भयो । त्यति ठुलो समस्या छैन, उपचार गरे ठिक हुन्छ उहाँले भन्नुभयो, मेनेनजाइटिसको कारण टिवी भएको आशंका छ त्यसैले थप उपचारको लागि काठमाडौ पठाउने तयारी भैइरहेको छ ।
एक महिना अघि कामको सिलसिलामा भारत गएका झुपलाल श्रीमति बिरामी भएको खवर पाउन वित्तिकै घर फकिनु भएको थियो । दशैतिहारमा छोराछोरीलाई कपडा फेर्नको लागि केही कमाइ हुन्छ कि भनेर कालापहाड गए, एक महिनाको कमाई उतै छाडेर, भाडा काडेर घर फर्के उहाँले भन्नुभयो । अहिले आइसीयूमा हरेक दिन बाह्र सय र वेडचार्ज २ सय गरी चौधसय रुपैया खर्च भैइरहेको छ । हरेक महिना दमको एक हजार रुपैयाको औषधी किन्नु पर्ने झुपलालले बताउँनु भयो । उपचारमा सहयोग गरेर श्रीमतिको जीवन बचाई दिन पनि उहाँले सवैसँग आग्रह गर्नु भएको छ । आइसीयुमा राखेर उपचार गरिरहनु भएकी रामसरा बोल्न सक्नु हुन्न ।
आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकोले उहाँलाई छोराछोरी पठाउन, घरखर्च चलाउन र श्रीमतिको उपचार गर्न निकै समस्या भैइरहेको छ । आयआर्जनको बाटो छैन दुखेसो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, गाउँलेसँग ऋण सापट गरेर कति दिन चलाउने ? छोराछोरीको पढाई राम्रो भएपनि उनीहरुलाई राम्रो विद्यालय पढाउन नसकेको उहाँले बताउँनु भयो । उहाँकी जेठीछोरी हिरा गाउँकै मालिका माध्यामिक विद्यालयमा ११ कक्षामा पढ्दैछन । भने माइली छोरी अनुपा १० कक्षा, छोरा भीमप्रसाद ७ कक्षा, साइली छोरी अनिता ५ कक्षा र कान्छी छोरी निर्माला पनि गाउँकै विद्यालयमा १ कक्षामा पढ्दैछन । आर्थिक समस्याले गर्दा जेठी छोरी हिरालाई प्राविधिक शिक्षा पढाउने सपना अधुरै रहेको झुपलालले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित मितिः १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०५:०३